संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले सन् १८६२ मा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘हामी निकै नै बिग्रिसकेका छौं र खत्तम पनि भइसकेका छौं त्यसैले अब हामीले सम्पूर्ण संरचनाको समग्रतामा सुधार गरी राम्रो बनाउनुको विकल्प छैन ।’
६ नोभेम्बर १८६० मा लिंकन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । यसपछि उनले अमेरिकामा दास प्रथा उन्मूलनका लागि कदम चाले । १२ अप्रिल १८६१ मा अमेरिकामा गृह युद्ध सुरु भएको थियो । गृहयुद्ध भए पनि लिंकन आफ्नो लक्ष्यबाट पछाडि हटेनन् ।
मान्छेले मान्छेलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ र न्यूनतम मानव अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उनको लक्ष्य थियो । उनी मानव अधिकारका लागि सक्रियतापूवर्क लागिरहे । यसै क्रममा १ जनवरी १८६३ मा उनले दास प्रथा अन्त्य भएको घोषणापत्र जारी गरे ।
नेपालमा बलियो स्थिर सरकार छ । तर, मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको अवस्था यतिबेला पूर्ण बिग्रिसकेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, कूटनीतिकलगायतका संरचना धमिरो लागेर बिस्तारै मक्किँदै छन् । न्याय र समानता दलका घोषणपत्रमा सीमित बने ।
व्यवहारमा अन्याय, असमानता, दलालीकरण र भ्रष्टीकरणले छोप्दै लग्यो । दुई तिहाइको सरकारको करिब डेढ वर्षको अवधिमा बलियो सरकार, योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको बाटोमा उन्मुख छाैं भन्नेसम्मको आभास नागरिकलाई दिलाउन सकेको छैन ।
समस्याका चाङै चाङ छन् । यतिबेला नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनैपर्ने बाध्यतासमेत छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई जुन रूपमा संरक्षण छ, नभएकालाई वास्ता गरिँदैन ।
केही महिनाअघि ललितपुरको भैंसीपाटीमा भएको बम विस्फोटमा मारिएका नागरिकबारे सरकार र राजनीतिक दलले चार अक्षरको समवेदनासमेत दिएनन् ।
कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएसम्म सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राशासनिक सेवा उपभोग गर्न वा कुनै अप्ठ्यारो आइपर्यो भने कही कतैबाट सहयोग पाउन सक्ने अवस्था छैन । नागरिक राजनीतिक दलको छाताभन्दा बाहिर रहेर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
राजनीतिक दल र नेताले गरेका अक्षम्य अपराधसमेत आत्मालाई बन्धकी राखेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्न कार्यकर्ता विवश छन् । कुनै राजनीति दलमा संलग्न नहुने हो भने अस्पतालमा उपचार पाउन, जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता पाउन, गाउँपालिकाबाट योजना पाउन र गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो प्रवत्तिका कारण नेपाली समाज कुन दिशातर्फ जाँदै छ ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं ।
गाउँमा खानेपानी योजना वा कुवा मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने बजेट राजनीतिक दलको छाताभित्र ओत नलागीकन पाइँदैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबारसँगै पुगेका नवराजारानीले दलको सदस्यता प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्र ठेक्का दिने वा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउँछन् । यसले एकातिर अनियमिततालाई संस्थागत गरिरहेको छ भने अर्कातिर आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्न सकिएको छैन ।
आवश्यकतालाई पन्छ्याएर दलका असली कार्यकर्ताको हितमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । जसले नेपाली समाजलाई तल्लो तहदेखि नै मक्काउँदै लगेको छ । यस किसिमको गलत प्रवृत्ति समाजको तल्लो तहदेखि नै मौलाउँदै जाँदा देशको समग्र संरचनामै धुलिया लागिरहेको आभास हुन्छ ।
ससाना विषयमा राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति झागिँदै गएको छ । विद्यार्थी पार्टीअनुसार विभाजित छन् । पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी र बौद्धिकवर्ग सबै पार्टीगत रूपमा विभाजित छन् । आफ्नो क्षमताभन्दा राजनीतिक दर्शन र त्यसमाथिको विश्वासका भ¥याङ चढेर माथि पुग्ने यिनीहरुको एक मात्र ध्येय देखिन्छ । बौद्धिक वर्ग राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि शिर झुकाई सानो पद वा थोरै रकममा सजिलै बिकिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा दलका कार्यकर्ता र पार्टी कार्यालयमा बौद्धिक देखिँदा गर्व अनुभव गर्छन् । आफ्नो दायित्व भुल्ने र दलीय स्वार्थको आधारमा बौद्धिकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पत्रकार तथ्यलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफू आबद्ध दलको स्वार्थअनुसार समाचार र विचार उत्पादनमा व्यस्त छन् ।
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्र दलीय आस्थाको आधारमा विभाजित छन् । कुन पार्टीको सेवाग्राही हो भनेर समेत सेवा दिने वा नदिने निर्णय गरिरहेका छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार झन् झन् फैलिँदो अवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भयो । तर, यस्ता निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारबारे कुनै बहस र छलफलसमेत सुरु हुँदैन ।
हरेक दिन उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणको दोषीबारे मिहिन र तथ्यपरक अनुसन्धान हुनै पाएन । संसदीय समितिले ६ अर्ब बढी अनियमितता भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्रतिपक्षले यसबारे बलियो आवाज उठाउनै सकेन । त्यस्तै, सरकारले यसलाई छानबिनका लागि कुनै पनि तत्परता देखाएको छ ।
अख्तियार त यतिबेला मसानघाटमै पुगिसकेझैं लाग्छ । आफ्नै आयुक्त भ्रष्टाचारमा डरलाग्दो गरी फसेपछि अख्तियारमाथिको नागरिक विश्वास डगमगाएको छ ।
सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने सवालमा अख्तियार अझै बेखबर छ । ३८ टन सुन तस्करी भएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसका दोषी खोजी गर्न र कारबाही गर्न सक्ने हैसियतमा स्वयं सरकार छैन वा चाहँदैन ।
हरेक दिन यौनजन्य दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या भएको आधा वर्ष बितिसक्यो । तर, प्रशासनले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । उक्त घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीको बर्खास्ती गरेर उन्मुक्ति दिन प्रहरी उद्यत छ । यसलाई सदर गर्न क्रान्तिकारी गृहमन्त्री र दुई तिहाइ सरकार लाचार छ ।
नेपाल कर छलेर धनी हुनेका लागि स्वर्ग बन्दै गएको छ । एनसेलले ३८ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले कर तिराउन फैसला दिएको छ । तर, त्यो रकम कसरी उठाउने भन्नेमा सरकारले समयमै स्पष्ट र ठोस कार्य योजना बनाउन सकेको छैन ।
फेरि सर्वोच्च अदालतका अर्का थरी न्यायाधीश छलिएको कर तिर्नु नपर्ने बताउँछन् । झन्डै बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न पुग्ने कर उठाउने विषयमा सबैको मिलेमतोमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
यत्रो रकम कर छली गर्ने निकायबाट कर उठाउनुको साटो सरकार लाचारी प्रस्तुत गर्दै आफ्नो भक्ती गानसहितको ज्याकेट विज्ञापन पत्रिकामा छापिदिन अनुनय विनय गर्छ । सरकार विगतका म्यादी सरकारले गर्ने सामान्य टालटुले कार्यभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
हरेक सरकार टालटुले काम गर्दै आएका छन्, चाहे त्यो अल्पमतको सरकार होस् या बहुमतको होस् । तर, आधुनिक विकासका अवधारणाअन्तर्गतका विकास प्रशासन र आर्थिक प्रशासनलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने क्षमता अझै बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने आभास हुन्छ । जनचाहनाअनुसारको प्रगति गर्न नसक्नुको खास कारण व्यवस्था बदलिए पनि यसका पात्र उही रहनु नै प्रमुख हो ।
हरेक पार्टीमा एउटै नेता तथा अनुहारले झन्डै दुई–तीन दशकदेखि नेतृत्व कब्जा गरिरहेका छन् । यसो हुँदा परिवर्तनको ढोका बन्द भएका छन् । विकासका नवअवधारणालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै नेतृत्वसँग आवश्यक क्षमता रहेको देखिएन । यिनीहरुले कि त राज्य प्रशासनका विधि तथा प्रक्रियालाई बुझेका छैनन् या त त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । जसले हाम्रो संरचना झन् झन् ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ ।
नेपालका अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्य वा तोकिएको विषयवस्तुमा १० मिनेट तार्किक र प्रासंगिक कुरा बोल्न सक्दैनन् । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हो ? र, त्यसलाई प्राप्त गर्न के गर्ने भन्ने कुनै पनि मन्त्रीसँग योजना तथा दृष्टिकोण छैन ।
नागरिक बस्ने ठाउँमा कुर्सी परिवर्तन गरिएको वा थपिएको, कार्पेट परिवर्तन गरिएको, पिउने पानीको मेसिन राखिएको, स्यानेटरी प्याड झर्ने मेसिन राखिएको जस्ता कामलाई मन्त्रालय वा मन्त्रीको सफलताको आधार मान्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व पनि यसभन्दा फरक छैन । यस्तो अवस्थामा देश बन्ला भन्ने सोचाइ कोरा कल्पना मात्र हुन जान्छ ।
अन्त्यमा यति बेला नेपाल अब्राहम लिंकनले भने जस्तै अवस्थामा रुमल्लिरहेको छ । यसको सम्पूर्ण संरचना नै ध्वस्त हुने खतरामा छ । यसका लागि सम्पूर्ण संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६, ०३:०१:००